Toamasina : Mpangalatra “batterie” niharan’ny fitsaram-bahoaka, iray maty
Vous êtes ici: Accueil → Faits-Divers → 2016 → août → 16 → Toamasina : Mpangalatra “batterie” niharan’ny fitsaram-bahoaka, iray maty
Amin’ireo firongatry ny vaky trano sy fanendahana ary sinto-mahery eto Toamasina izao, dia maro amin’ny olona no efa tena romotra noho ny tsy filaminana mianjady aminy, izay lasa tsy mampatory alina sy andro ny ankamaroan’ny fianakaviana. Misy mihitsy ny fokontany lasa nanangana ny andrimasom-pokonolona manao fiambenana alina, na manaramana tanora an-tanàna miambina ny fokontany.
Vokatr’izay hatezerana efa mihoapampana amin’ny olona izay, dia niharan’ny fitsaram-bahoaka avy hatrany ireto roa lahy tratran’ny fokonolona ambodiomby teo am-pangalarana “batterie”- na fiara tao an-tokotan’olona, ny alin’ny sabotsy nifoha ny alahady tokony tamin’ny 1 ora maraina, tao amin’ny fokontan’i Depot Analakininina. Naratra mafy izy roa lahy niharan’ny fitsaram-bahoaka ireto, ny mpitandro ny filaminana no nitondra azy teny amin’ny hopitaly, ary nahazo ny fitsaboana ihany, saingy tamin’ny 5ora maraina noho ny hamafin’ny ratrany dia maty ny iray. Mbola miady amin’ny fahafatesana kosa hatramin’ny nanoratana ny vaovao ilay faharoa. Araka ny nambaran’izy io, izay mbola afaka niresaka tamin’ny mpanao gazety, dia ny fahatapahan’ny jiro tamin’io fotoana io no nampirisika azy roa lahy hangalatra ilay “batterie”.
Nambaran’ireo fokonolona ao Depot Analakininina kosa, fa noho ny hakivian’izy ireo mahita ireo jiolahy voasambotry ny mpitandro ny filaminana lasa miriorio miverina eny amin’ny fiaraha-monina andro vitsy aorian’ny fisamborana azy, efa misy tsy fahatokisana ny fitsarana ny olona, dia miroso amin’izao fitsaram-bahoaka izao amin’ireo jiolahy tratra eny anivon’ny fokontany eny.